IINGCAMANGO EZIPHEZULU ZE-109 ZEARMBAND ZETATTOO - [2021 ISIKHOKELO SOKUPHEFUMLELA] - UHLOBO
Iingcamango eziphezulu ze-109 zeArmband zeTattoo - [2021 Isikhokelo sokuphefumlela]
Ah iarmband. Ngelixa isitayile se tattoo esasithandwayo saye saziwa ngaphambili, mva nje besibuya kwakhona kwiingalo zamanenekazi kwihlabathi liphela.
Kwiminyaka eyadlulayo, ii-tattoo ze-armband zesiko lesiqhelo zazingeyondlela ekucaciseni ngayo indima yendoda okanye inqanaba phakathi kweqela labantu. Inyani yile, injongo yabo yayihlala inxulunyaniswa neentsingiselo ezahlukeneyo ezingathethiyo, ngezixhobo nazo.
Ngamaxesha embali, njengobudala beBronze, iiarmbands zazenziwe ngobhedu kunye nejeti, ilitye elinqabileyo elincinci elenziwe ngomthi oxhonyiweyo phantsi koxinzelelo olukhulu. Ewe, ngelo xesha ibhendi yentsimbi yathatha igama elahlukileyo lendandatho yengalo.
Nangona kunjalo, nangokuhamba kwexesha usazakufumana amakhonkco engalo asetyenziswa ngababethi bezigubhu baseKandyan baseSri Lanka ababhiyozela isithethe esidala. Kwaye ukuba ujonga emva kwimbali yaseSri Lankan uyakufumana amabali oomolokazana abanxibe ii-armlets ukugcina ibhadi elibi.
Ngamaxesha aphakathi ngexesha lejoust, ii-knights zazinxiba izikhafu okanye iithski ngakwicala lokubonisa ukudibana ngokweemvakalelo okanye ukukholelwa kwinenekazi lakhe. Ukuba ukhe wazibuza ukuba ibinzana elinxiba intliziyo yakho emkhonweni wakho livela phi, ikhona impendulo yakho.
Amasiko ecaleni, iiarmbands zinokufunyanwa zonke ezingalweni zamadoda kuzo zonke iindlela zobomi kubandakanya nomkhosi (ubhedu) , Cinezela, amaqela ezemidlalo kunye nokunye. Okubangela umdla ngokwaneleyo kukuba, intsingiselo yale mihla yokwahlula ukuba leliphi iqela, iqela, isikhundla okanye indima umntu akuyo, inolwalamano olufanayo nolwangaphambili.
Ngale nto ithethwayo, zininzi izizathu ezahlukeneyo zokufumana i-armband tattoo. Ngokuqinisekileyo, amaxesha embali kunqabile ukuba nee-tatoos kwaye endaweni yoko ukhethe ilaphu kunye nesinyithi, nangona kunjalo, ukuba kukho into ebalulekileyo kuwe, kutheni ungayifaki i-inki ngokusisigxina? Emva kwayo yonke loo nto, inqaku le tattoos ukuqala ngalo.
Thatha umzuzwana ukuphonononga ezi 70 zingcono yoyilo lwearmband yoyilo kumadoda angezantsi. Ndiqinisekile ukuba uyakufumana izimvo ezininzi zokunxiba kumkhono wakho ukusuka kwiklasikhi ukuya kupholile, okwangoku kunye nokunye.
umvambo omncinci we tattoo esandleni
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango eziphezulu zeTattoo ezingama-90 +
1. Iidoti zomsebenzi wesacholo
Eli licandelo lobugcisa elenziwe ngobuchule elinokuthi lithathe ixesha eliphindwe kabini kubungakanani obunokucinga ngalo. Sebenzisa ezi mbono zimbini zahlukeneyo-umsebenzi omnyama kunye nomsebenzi wamachaphaza- yiza kunye ukuze wenze umxholo wejometri entle. Zonke iinxalenye zale tattoo ziyakhwaza kumgangatho.
Ukufotwa kwamachaphaza kule tattoo ye-3-levele armband kumnandi. Umfanekiso ophezulu ngokwawo unomdla, usebenzisa ii-angles ngokukodwa kakuhle ukudala ubunzulu kunye nesitayile kwindawo evalelweyo. Amanye amaqela amabini abonisa ngeyona ndlela ilungileyo. Apha, ixesha elichitha ixesha elichaphazelweyo lomsebenzi uqeshwe ngesitayile ukwenza iimilo ezahlukileyo kwingalo yesifundo.
Olu hlobo lwe tattoo yebhendi lufumaneka kwi ingalo Kwaye yenziwe, ubuncinci ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, yendlela yamachaphaza. Obu buchule bunomdla kwaye buyindlela eyahlukileyo yokwenza umvambo kulusu kusetyenziswa ingqokelela yamachaphaza amancinci.
Uninzi lwee tattoos zinamaqela angaphezu kwelinye kwaye kuphela ezinye zazo zenziwe ngamachaphaza. Eminye ibhendi eyodwa yodwa eyenziwe kusetyenziswa obu buchule. Umsebenzi wamachaphaza uhlala usetyenziswa kuphela kwinxalenye yebhanti okanye iibhendi. Oko bekutshiwo, oku ayingomthetho okanye umda kwaye ekugqibeleni indlela yamachaphaza enokwenziwa inokwenziwa ngendlela engaphezulu kwesinye.
Ukubekwa ngokuthe ngqo kwale tattoo kwiphambili nakho kubalulekile. Kwi-forearm, ibhendi (okanye amaqela amaninzi) akwisikhundla esithe tye. Ngamanye amagama, akukho lula ukufihla okanye ukubonisa, nokuba yeyiphi na indoda ethile enqwenela ukuyenza ngexesha elithile, ingaphezulu. Ngokuyintloko, umzekelo, ikwenyuka ngokwengqiqo yokuba ihlala imnandi. I-tattoo yangaphambi kwebhendi enamachaphaza inomdla kwaye inomdla.
2.I-Tattoos emnyama yeTribal Forearm
Eyilwe ngeendlela ezahlukeneyo, iqela lesizwe elimnyama iiTattoos zangaphambili ziyile rhoqo kwaye ziyamangalisa. Le misebenzi mihle yobugcisa ibonisa imiqondiso eyahlukeneyo kunye neesimboli ngokudibeneyo umnyama omnyama iibhanti. Ngamanye amaxesha ezi mpawu zifunyanwa phakathi kweebhendi, ngamanye amaxesha ngaphakathi.
Nokuba zifomathiwe njani, nangona kunjalo, ii-tattoos zebhendi emnyama yesizwe ngokuqinisekileyo yinto enokuthwala ixabiso elikhulu. Iintsingiselo zeempawu zazo azisoloko zibonakala kodwa akukho mathandabuzo okuba zihlala zihamba ngokubaluleka okukhulu.
3. IiTattoos zaseMpuma eziphefumlelweyo zebhendi
Le tattoo ye-armband ephezulu yokubhabha. Yinto yokubonisa kuba isebenzisa ubuchule obunzima ukukhupha umphumo wethayile kaMoses. Umsebenzi womgca uchanekile, ucocekile kwaye uzotywe kakuhle. Umsebenzi wamachaphaza ujongene nobunzima, kwaye indalo ebonakala ngathi ayinangxaki yeepateni zejometri ezichazwe ngokucacileyo bubungqina kwinqanaba lobuchule lomculi.
Sebenzisa isithuba esinguziro ngokufanelekileyo sisakhono esahlula amagcisa afanelekileyo kwezona zihle kakhulu kumvambo. Umgangatho wale tattoo emnyama ibonakala ngathi ilula ifunyenwe ekusebenziseni kwegcisa leendawo ezingezizo ezobuchwephesha ukwenza iipateni ezingenasiphako kunye neemilo ngaphakathi kwe-armband.
4. IiTattoos zebhendi yeGeometric Forearm
Ezi band band, ziza kumanqanaba ahlukeneyo obungqingqwa, zihlala zilungelelanisa ukubona njengombukeli. Ngendlela efanayo ngokuqinisekileyo ziingceba ze-badass ze-inki ukubonisa ingalo kabani. Ezi tatto ziza ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo kunye neepateni kwaye zihlala zimelela ngaphezu kokucinga.
Banokubonakala kwabanye njengamaqela nje alungileyo kunye nengqokelela ebukeka kakubi yeemilo. Kuzo zonke izinto ezikhoyo, zinentsingiselo yokwenyani kwaye zihlala zisiqwenga somzimba wobugcisa.
5. IiTattoos zeBhendi yangaphambi koBuchule
Ezinye ii-tatoos zebhendi yamanqatha ayisiyonto inomdla kwaye iyodwa, ikwayiyo nezinto ezintsha. Oku kunokuba yinyani ngengqondo yokuba bafezekise izinto ezintsha zokutattoo kwezobugcisa okanye nangobuhle nje. Ukuyilwa kweTattoo kunokubonwa kwakhona ngendlela yokuba umculi enze isiqwenga xa kufikwa kubuchule bokuyila okanye ukwahlulahlula okunikezwe kweso siqwenga.
6. IiTattoos zamaKrestu eziQhelekileyo
Ngelixa iitattoo ezininzi zisenza kubhekiswa kuThixo okanye naluphi na olunye uhlobo lweenkolelo zonqulo okanye zokomoya, ezinye zichaneke ngakumbi ngayo kunabanye. Ngokuqinisekileyo oku kuyinyani kwiiattoos zebhendi yengalo yangaphambili njengoko kunjalo nakwezinye iintlobo ze-inki.
Ii-tattoos zebhendi yangaphambi komKristu zihlala zibandakanya izinto ezahlukeneyo kunye neempawu ezaziwayo zokholo lobuKristu njengomnqamlezo okanye olunye uphawu oluqhelekileyo olufunyenwe phakathi kwenkolo yobuKrestu kunye nesiko. Ezi tatto zithetha lukhulu kubantu abaninzi njengoko zinokusebenza njengesikhumbuzo solawulo lomntu okanye inkolelo yenkolo.
7. Isithuba esingalunganga seNgalo yeBhendi yeTattoo
Ezinye ii-tattoos zebhendi yangaphambili zibonisa iimpawu, iimilo, iisimboli kunye nabanye abalinganiswa bentsingiselo kodwa ngendlela eyahlukileyo kule ikhankanywe apha ngaphambili. Kungenxa yokuba endaweni yokusebenzisa i-inki ye tattoo ukwenza iisimboli, iimilo, njl.njl.
Ezi tatto zisebenzisa kakhulu indawo engeyiyo echazwe yi-inki kunokuba i-inki ngokwayo. Yindlela yokuyila kunye nenamandla yokukhupha isiqwenga sobugcisa obunqwenelekayo kwi tattoo yebhanti ngendlela eyahlukileyo.
8. I-Black Ink Armband Forearm iiTattoos
ulondolozo olusezantsi lomhlaba wentlango
Umdlalo olula kuyilo lwejometri unokwenza ii-armband tattoos ezifanelekileyo. Lo msebenzi wobugcisa unemiqolo emithandathu emxinwa kodwa eqinileyo ebhalwe umvambo umphambili wangaphakathi . Kukuqhekeka, amaqela amatsha eebhendi ezenziwe ngokucocekileyo kwaye zahlulwe ngokufanelekileyo.
Iitoto ze-armband zesizwe zazithandwa kakhulu kwiindawo zokuqala zenkulungwane njengoko inki yaba yinxalenye eyamkelekileyo yenkcubeko. Esi siqwenga sikhumbuza olo hlobo lwesitayile sinee-barb ezimnyama ezimnyama ezigxunyekwe kwisangqa esiqinileyo esijikeleze umphambili ongezantsi kwengqiniba.
Iingcamango zeTattoo yeBakala lobuGcisa
Olu seto lukhethekileyo lokuchasana luyilo lwe-armband epholileyo. Iintsuku ziphawulwe kudweliso lweendidi ezahlukeneyo zokwenza isiqwenga esihle, umsebenzi olula wamachaphaza wenza umda kumanqaku ahlukeneyo omabini omsebenzi wobugcisa.
Isitshixo sale armband encinci kukusetyenziswa kwemigca eyahlukeneyo-kunye namachaphaza anemibala kunye nokuhombisa-ukuqaqambisa ngokufanelekileyo i-armband enkulu, ejiyileyo ehamba ngomfanekiso. Ngokukhawuleza idibanisa i-latitude / longitude vibe xa uyijonga.
Le tattoo ye-armband yokuhombisa isebenzisa ifomathi ye-stencil ukwenza ityebile, icocekile umvambo omnyama . Kuyafana noyilo kwimida kwizakhelo, iimbiza zezityalo, kunye nakwiceramics yasekhaya.
Le ndlela yama-Aztec ephefumlelweyo yezitena ipholile. Eyona nto iphambili kwesi siqwenga kukufiphaza, okwenziwe kugxilwe kumsebenzi wedothi kunokuba kungwevu omnyama wesiko. Umsebenzi womgca kobu bugcisa ubamba ukugxila komculi ekuqwalaseleni iinkcukacha.
Iitattoo ze-armband ezenziwe kakuhle zenziwe kakuhle kakhulu, kwaye obu bugcisa bomzimba ngumzekelo obalaseleyo. Idibanisa ibhendi elula, yomgca omnye ejikeleze ingalo kunye neqela leentaka ezimnyama ezicabaleleyo ukwenza umfanekiso obambayo.
Iyasebenza iimilo zejiyometri eyenziwe ngemigca emnye emnyama yenza le armband ipatheni yahluke ngokupheleleyo. Yindlela elula kodwa eluncedo yokwenza uthotho lweemilo ezinomdla.
I-mandala yesihlakala se tattoo
Olu luhlobo olubanzi lweearmband tattoos zamadoda. Ijongeka kakhulu njenge-glacator's bracer okanye i-armguard. I tattoo isebenzisa umxube olungileyo womsebenzi womgca omnyama ukwenza imilo ecacileyo, ecaciswe kakuhle ngaphakathi komfanekiso, ixhaswe yingwevu engenamandla kunye indawo engalunganga ukwenza mnyama
Isiqwenga kulo mfanekiso sisebenzisa i-gradient entle yamanyathelo ombala ukusuka kobomvu ocacileyo ukuya kumnyama. Icandelo libonakala ngathi likhangeleka njengephepha le-litmus. Indlela umbala osetyenziswe ngayo ngumculi wenza ukuba iinxalenye ezibomvu ezikhanyayo ze tattoo zibonise isilonda esiluhlaza ngokusisigxina.
Eli qhekeza lesizwe ngumsebenzi wobuchule bobuchwephesha bokwenyani. Inaliti enye isetyenzisiwe apha, ukuyinika ukukrala kwemigca kunye nepateni ngaphakathi kwebhendi efunekayo ukubonisa ubuchule begcisa, ngelixa indawo zero nayo isebenza ekubumbeni uyilo.
Le tattoo isebenzisa ipateni enomdla, kodwa eyona nto inomdla kwesi siqwenga kukuba ucocekile kwaye uhlaziye njani umsebenzi womgca. Ukuba uyibeka ngokuchasene nomvambo omdala ongaphantsi kokwahluka kumgangatho kufana nobusuku nemini.
Iingcamango zeTattoo yeeNdawo zeNdalo
Zininzi izinto kule tattoo yomzimba eyimbonakalo. Isebenzisa umsebenzi omnyama weklasikhi kuyo yonke, kodwa ikwaxuba uluhlu oluhle lweepateni zenaliti ukwenza iindlela ezahlukeneyo zesithunzi kunye nomsebenzi womgca kulusu. Indlela esibhakabhakeni i-inki inomgangatho ophantse wentlanzi ekusebenzeni komthunzi.
Ukusetyenziswa kakhulu kombala othambileyo kwimpungutye ukwenza ibhendi yentaba ibe sisiqwenga sobugcisa. I-hue ethambileyo inceda impungutye ukudibanisa kuwo wonke umfanekiso kwaye iphakamise umjelo weentaba, ngakumbi ngendlela ethe yakhutshelwa ngayo ukwenza isiphumo se-cascading eboyeni. Umsebenzi womgca kuwo onke amabakala alo msebenzi wobugcisa uchanekile.
I-Armband Tattoo FAQs
Ithetha ntoni itattoo eqinileyo yearmband?
Iitattoo ze-armband eziqinileyo ngokwesiko zihlawula umntu othandekayo olahlekileyo, ngendlela efanayo neebhanti ezimnyama ezinxitywa ziimbaleki ezikhumbula ukufa kweklabhu enkulu okanye ebalulekileyo.
I-armband emnyama ebhalwe umvambo ivumela umntu ukuba akhumbule ilahleko yakhe ngokwamkela ubugcisa bomzimba obumele inkumbulo yabo.
Zeziphi ezinye izizathu zokufumana umvambo we-armband emnyama?
Isikhumbuzo ayisosizathu sodwa sokuba abantu bakhethe ukufumana ii-tattoo ze-armband ezimnyama. Kwiinkcubeko zesizwe-ezinje ngeeToos ezihlangeneyo zesizwe sasePolynesia okanye inkcubeko yakudala yoMzantsi Mpuma Asia kunye ne-Indian subcontinent - zimele amandla kunye nesibindi okanye ziyinxalenye yendlela ebanzi yejometri ebalulekileyo kwimixholo yokomfuziselo efana nokulingana kwesiko phakathi kobomi nokufa
Ngamanye amaxesha i-armband tattoo emnyama inokusebenza kakhulu ekugubungeleni amaqhekeza amadala okanye angadweliswanga kakuhle ngaphambili Ucingo oluhlabayo okanye iiarmband zeceltic ezingachanekanga. Bakwathandwa kakhulu ngabaqokeleli be tattoo abathanda ukusebenzisa uyilo setyhula kunye nokusetyenziswa kwejometri yokutshintsha inki emnyama kunye nendawo engalunganga.
Ixabisa malini iarmband tattoo?
Amaxabiso amancinci e-armband tattoo anokuvela kwi-150 yeedola kuyilo lwe-barest- cinga umsebenzi womgca omncinci owenziwe ngenaliti enye-ukuya kuthi ga kwi-1000 yeedola ngomsebenzi ontsonkothileyo, ontsonkothileyo njengamachaphaza omsebenzi wedoti okanye uyilo lwe-bio-mechanical themed armband.
Ixabiso eliphakathi lihlala phakathi kwe- $ 150- $ 200 ngeyure. Abanezakhono eziphezulu, kwimfuno yamagcisa anokuhlawulisa ukuya kuthi ga kwi-500 yeedola ngeyure, ngelixa abafundi abafundela umsebenzi kunye namagcisa anezakhono ezingaphantsi kwe- $ 75.00 ngeyure.
Khumbula i-15% ye-tip ngumndilili, kodwa i-20% yomsebenzi osemgangathweni icetyiswa kakhulu, kwaye uhlala uqinisekisa ukuba ucacisa amaxabiso nomculi wakho ngaphambi kokuhlala phantsi ukuze ufumane i-inki.
iitattoo zangaphakathi zamadoda
Ezona zihlangu zilungileyo zesikhumba emhlabeni
I tattoo yentlanzi ye-koi ngasemva
izimvo ezincinci zegumbi lokuhlala
I tattoo yomnwe womtshato / amadoda
Isinxibo esifanelekileyo sokuvuka
izimvo zepatio yamatye kuhlahlo-lwabiwo mali